Firefox 88 inosvika neWebRender zvakare yakaitwa muPlasma uye XFCE | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 88 yakasvika zuva rapfuura kupfuura zvaitarisirwa, asi neWebRender yakaitwa zvakare muPlasma neXFCE
Pazano reMozilla, nhasi wegumi nemaviri wanga uchifanirwa kutanga Firefox 88. Hatizive kuti nei vakachinja zvirongwa zvavo, asi pakupedzisira vakaparura vhezheni itsva yewebhusaiti yavo nezuro wacho, nezuro, Muvhuro, Kubvumbi 19. Yechinguvana anecdote padivi, ichi chikamu cheye gava browser yasvika neshanduko dzinoonekwa, kunyangwe ivo vaine zvishoma kana chekuita nezve izvo zvinosvika kubva mushanduro ichazoburitswa mumavhiki mana.
Shanduko iri pachena ndeyekuti, vangangoita mwedzi mitanhatu vakaparadzana, ivo pakupedzisira vakwanisa kugadzirisa bhagi rakadzivirira Alpenglow Rima ichavhurwa paLinux. Alpenglow idingindira rinoiswa nekumisikidza uye rinobatana nechiedza uye nerima, uye rine mwenje waro wakajeka uye nerima unoitwa zvichienderana netimu yatinoshandisa mune yedu sisitimu yekushandisa. Alpenglow Rima yatove kushanda paLinux, asi manzwi aro ari epepuru, uye kwete nhema kana kuchena.
1 Pfungwa dzeFirefox 88
2 Iye zvino yave kuwanikwa mumahofisi epamutemo
Pfungwa dzeFirefox 88
Dhinda unodzoreredza: Margin mauniti izvozvi akaiswa munzvimbo.
Iye zvino unogona kutsvedza kuswededza pamwe neyekubata-bata muLinux (sora-kusvika-kutora).
Kuti udzivirire pakurovera kwepachivande kwenzvimbo, Firefox ikozvino inoparadzanisa data rezita rezita kune webhusaiti iyo rakaigadzira.
Vaverengi veScreen havachaverenga zvisirizvo zvemukati izvo zvakavharwa nemawebhusaiti, sezvazviri mune zvinyorwa muzvikamu zvekubatsira zveGoogle.
Firefox haizokumbire kupinda maikorofoni yako kana kamera kana iwe watobvumidza mukana kune imwecheteyo kifaa panzvimbo imwechete uye pane imwechete tebhu mumasekondi makumi mashanu apfuura.
Iko "Tora skrini" basa rakabviswa kubva paPeji Maitiro menyu mune kero bar. Kuti utore skrini, iwe ikozvino unofanirwa kudzvanya kurudyi mbeva bhatani kuti uvhure mamiriro ezvinhu. Pfupiso kune screenshots inogona zvakare kuwedzerwa yakananga kubha rekushandisa kuburikidza neCustomize menyu.
FTP rutsigiro yakaremara, uye kubviswa kwayo kwakazara kwakarongerwa kuburitswa mune ramangwana. Kugadzirisa iyi njodzi yekuchengetedza kunoderedza mukana wekurwiswa, uku uchibvisa rutsigiro rweiyo isina kunyorwa protocol.
Kugadziriswa kwezvipenga uye kugadzirisa kugadzirisa.
Izvo hazvitaure nezvazvo pane yepamutemo runyorwa, asi ivo zvakare vakagonesa WebRender mu KDE uye XFCE. Izvo hazvitaure nezveAlpenglow Rima chinhu futi, asi inowanikwa.
Iye zvino yave kuwanikwa mumahofisi epamutemo
Firefox 88 yakaburitswa anopfuura maawa makumi maviri nemana apfuura, uye ikozvino iripo kurodha pasi kubva website yepamutemo uye mune mamwe emahofisi epamutemo (akasimbiswa muManjaro). Iyo inotevera vhezheni ichave yatove Firefox 89 iyo inomutsa Proton, yazvino uye yekushongedza dhizaini ine yakawanda yakatenderera maumbirwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 88 yakasvika zuva rapfuura kupfuura zvaitarisirwa, asi neWebRender yakaitwa zvakare muPlasma neXFCE
Santiago Jose Lopez Borrazas akadaro
Pa webhusaiti yeMozilla ivo vatozvitaura pachena:
Kuti waive musi waApril 19, kwete wa20.Vakatara zuva sezvavaida, uri Muvhuro wadarika.
Pindura Santiago José López Borrazás
Mhoro Santiago. Vakaburitsa misi uye vanowanzo vatevera kune iyo tsamba. Ziva kuti zvese zvaburitswa zvakapfuura zvave neChipiri masikati. Izvi zvaive Muvhuro.
Zvino ini ndaona uye ivo vakachinjawo mamwe mazuva, asi inotevera vhezheni inofanira zvakare kuve Chipiri.
Zvamunoona ndezvekuti "yakaburitswa musi wa19," asi vanga vakarongerwa kumakumi maviri kwemwedzi miviri.
Mamwe mashoko pamusoro peJingPad A1 anoburitswa, senge paachawanikwa kuti utenge
Vivaldi, iyo browser yeanoda vashandisi iyo inokoka shanduko nemabasa ayo akakosha